के सन्देस ल्याएर अाँउदै छन् भारतीय विशेष दुत ? देउवा सरकार वेखबर | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more के सन्देस ल्याएर अाँउदै छन् भारतीय विशेष दुत ? देउवा सरकार वेखबर
के सन्देस ल्याएर अाँउदै छन् भारतीय विशेष दुत ? देउवा सरकार वेखबर	प्रचण्ड, अाेलीसंगकाे भेट पछि फर्किनेबेला देउवालार्इ भेट्ने स्वराजकाे तयारी
माघ १७ गते, २०७४ - १३:०३
काठमाडाै । नाकाबन्दीले गर्दा भारत प्रतिकाे नेपाली चाँसाे धेरै कम भैसकेकाे छ । बैशाखमा गएको भुकम्पले नेपालीलार्इ रूवाएकाे बेला भारतले नेपालको बोर्डरमा लगाएको ‘अघोषित’ नाकाबन्दीले छिमेकी देशकाे बहादुरी सफलतापूर्वक देखार्इ सकेको छ ।
नयाँ संविधानमा भारतीय चासोलाई सम्वोधन नगरेको आधारमा नेपाललाई दण्डित गर्ने भारतकाे यो क्रियाकलापले कुटनीतिक क्षेत्रमा आत्महत्या हाे भनेर भन्न सकिन्छ । भारतले गरेकाे नाकाबन्दीले पेट्रोलियम मात्रै नभएर औषधी र भुकम्पका राहत सामग्रीको आयात पनि अवरुद्ध भएको थियाे ।
कुहिएका अाजु, प्याज, टमाटर पठाएर असल छिमेकीकाे अाेकालत पनि गरेकाे सर्वविदितै छ । नयाँ दिल्लीले संविधानमा मधेसी जनताकाे चासोलाइ बुइ बनाएर सम्वोधन गर्न भनेको थियो । तर, नेपालका नीति निर्माताले त्यसकुरालाई लत्याए र ‘ठुल्दाई’ को अनुशासनमा आफूहरु नबस्ने स्वाभिमानी दम देखाएका थिए ।
यस दमदार कदममा नाकाबन्दीले ढाडसेक्ने भारतकाे चाहनालार्इ सम्पूर्ण नेपालीले उच्च मनाेवलका साथ लत्याइ दिएका थिए । भारतप्रतिको बढ्दो घृणा मात्र नभएर उसकाे राजनीतिक वास्तविकता छर्लंग देखिसकेका थिए । नयाँ दिल्लीले नेपालकाे नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट भएर गरेको उग्र प्रदर्शनलाई आपूर्ति अवरोधको कारणका रुपमा अघि सार्दै देखाएकाे सदभावबाट भारत र नेपालकाे सम्वन्ध चिसिदै गएकाे छ ।
त्यहि बेला देखि विग्रेको नेपाल भारत सम्वनधलार्इ सुधार गर्ने मुख्य उद्धेश्य बाेकेर भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज २४ घण्टे भ्रमणका लागि आउंदै छिन् । छिमेकी देशकाे बरिष्ठ कुटनीतिज्ञ नेपाल अाउन लागिरहंदा देउवा सरकार भने बेखवर रहेको छ । भारतीय अधिकारिले स्वराज भ्रमणको औपचारिक जानकारी दिएको दुई दिन वितिसक्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
भारतीय अधिकारीले स्वराजको भ्रमण उच्च राजनीतिक भेटघाटको निरन्तरता भएको बताएको छ । स्वराज भाेलि (बिहीबार) नेपाल आइपुग्ने जानकारी पाए पनि कति बजे काठमाडौं उत्रने भन्नेवारे जानकारी छैन । यसाे त कार्यतालिका के–के छ भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महाशाखाले पनि केही बताउन सकेको छैन ।
स्वराजको टोली विशेष विमानमा काठमाडौं आउने र उनीसंगै नवनियुक्त विदेशसचिव विजयकेशव गोखलगाएतका वरिष्ठ अधिकारीहरू हुने बताइएकाे छ । विमानबाट झर्ने वित्तिकै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने तयारी छ । नेपाल हेर्ने डेस्क प्रमुख सुधाकर दलेला पनि सहभागी त्यस टाेलीले गर्ने भनिएकाे भेटघाटलार्इ अर्थपूर्णरूपमा हेरिएकाे छ ।
नेपालकाे भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा शान्तिप्रकृयाका एक मात्र जीवित हस्ताक्षर कर्ता प्रचण्डलाई कतिबेला कहां भेट्ने भन्ने सूचना पहिले नै गरिसकिएको भारतीय दूतावासले बताएको छ । वाम गठबन्धनका लिडरलार्इ भेटीसकेपछि पर्सी फर्कनुअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने तालिका रहेकाे वताइएको छ ।
नेपाल भेटवार्ता दुईपक्षीय सहकार्य र सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहने यस अघि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । वाम गठबन्धनकाे ठूलाे दल नेकपा माअाेवादी केन्द्रले अनुपयुक्त समयमा भ्रमण नगर्न वेसहाेला भनिरहेकाे र नेपाल सरकारले निमन्त्रणा नै नगरी हुन लागेको याे कुटनैतिक भेटघाटले भारत सरकारको के सन्देश बोकेर आउन लागेको हो त्यो भने हेर्न वाँकी छ । तर पटक-पटक ओलीसँग फोन वार्ता गरेका मोदीले पछिल्लो समय स्वराजलाई नेपाल पठाउनुले भ्रमणलाई गहिरार्इ पूर्वक हेरिएकाे छ ।
माघ १७ गते, २०७४ - १३:०३ मा प्रकाशित